Tenga PolypodiuM Yakawanda yehupfu (9001-00-7) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Plant Plant Extract / PolypodiuM Bvisa poda
Rating: SKU: 9001-00-7. Category: Plant Plant Extract
MUTSVENE unobatanidzwa uye unogadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika pakukura kwePolpodiuM Extract powder (9001-00-7), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
The PolypodiuM Extract ine chinhu chikuru chinopesana nehuwandu hwekupararira kwehepatocellular carcinoma masero mu vitro. Kubviswa kwemvura keel kwakarambidza kuputika kweganda kuricle yakakonzerwa ne xylene uye kuputika kwemakumbo emakumbo kunokonzerwa ne carrageenan, iyo inogona kuvharidza kemikemikari kana kurwadziwa kwepamuviri. Mhedziso yekuderedza shuga yeropa uye cholesterol pamhuka.
PolypodiuM Bvisa poda vhidhiyo
PolypodiuM Chimwe chepfu zvinhu Characters
Name: PolypodiuM Chimwe chepfu
Molecular Kurema: 226.23
PolypodiuM Zvimwe zvinoshandiswa poda kushandisa
PolypodiuM Bvisa (CAS 9001-00-7) inozivikanwa zvakare sezita rezita SOLARICARE.
PolypodiuM Nyuchi Inoshandiswa pombi yakasvibirira
Nyaya dzakawanda dzekutsvakurudza kwePolpodium leucotomos kubudiswa kwemashizha kwave kuitwa nemazai eenenge 240mg kusvika 480mg pazuva, kunyange zvazvo zvidzidzo zvakasiyana-siyana zvakaitwa nemigumisiro yakaonekwa pamatazi e80mg kana 120mg, nezvimwe zviitiko pa 720mg pazuva kana kupfuura. Nhungamiro yakafanana inoratidzika kuva masero ezuva nezuva eenenge 7.5mg nekg yehutatu hwomunhu. Kune 150 pound munhu, izvi zvaizova zvishoma ne511mg pazuva.
Yambiro pamusoro pePolpodiuM Nyuchi inenge yakasvibiswa
PLE zvinowedzera zvinowanzoshandiswa kwemakore anopfuura 20 muEurope, uye dzimwe nzvimbo dzenyika, pasina mimwe migumisiro inenge ichitaurirwa. Izvozvo hazvina kuzivikanwa nemigumisiro inobatanidza nePLE inotorwa mumuromo kana sekudya zvinowedzera.
Polypodium leucotomos kubviswa kwemashizha kwakaratidza kubatsira apo inotorwa nemuromo supplementation, uye kunyange kune imwe nguva iyo inoshandiswa pamusoro. Pamusoro pemafungiro ayo ezvinyorwa zvinowanzokurudzirwa kuitora muromo 30 kumaminitsi e60 isati yasvikirwa nezuva, kamwe chete kana kazhinji pazuva.
Nzira yekutenga PolypodiuM Chimwe chepfu (CAS 9001-00-7) kubva kuAASraw